Caalamka, 12 May 2017
Khamiis 12 May 2017
Erdogan iyo Trump oo Ku Kulmaya Washington
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu kala hadli doono dhigiisa dalka Mareykanka Donald Trump go,aanka ay dawladda Mareykanka ku qalabeyneyso malleeshiyaadka Kurdiyiinta Suuriya, marka ay ku kulmaan magaaladan Washington todobaadka soo socda.
Barasaabkii Jakarta oo Xabsi lagu Xukumay
Barasaabka Kirishtanka ah ee Jakarta, oo bishii lasoo dhoofay lumiyey doorasho uu doonayey in dib loogu soo doorto, ayaa waxaa maxkamad ku taalla dalka Indonesia ay ku xukuntay laba sano oo xabsi ah sababo la xiriira inuu diinta Islaamka aflgaadeeyey.
82 Ka Mid ah Gabdhaha Chibok oo La Xoreeyey
Madaxweynaha Nigerian Muhammadu Buhari ayaa la kulmay Axadi 82 gabadhood oo ka mid ahaa gadbho ciyaal iskuul ahaa oo ay saddex sano ka hor kooxda Boko Haram ka afduubtay waqooyibari ee dalka Nigeria.
France oo Macron u Dooratay Madaxweyne
Emmanuel Macron ayaa noqday madaxweynaha dalka Faransiiska, kadib marki uu ka guuleystay musharaxii xisbiga midigta fog Marine La Pen oo ay ku tartameen doorshadi Axadi shalay ka dhacday dalkaasi.
France: Codbixintii oo la Dareeray
Labada hoggaamiye ayaa kala wata barnaamijyada in la sii hayo jidka isdhexgalka caalamka (globalization) iyo dhinaca kale oo raba in la qaado jid kaas ka duwan, lagana baxo Midawga Yurub.
Dagaal Dhexmaray Ciidamada Dalalka Pakistan iyo Afghanistan
Isku dhacyo xuduudda ku dhex maray ciidamada dalalka Pakistan iyo Afghanistan ayaa dhowr qof oo shacab ah ku dilay, islamarkaana tobanaeeyo ku dhaawacay dhul lagu muransan yahay, sida ay sheegeen saraakiil.
Le Pen Iyo Macron oo Is Weeraray
Musharaxiinta doorashada madaxtinimada dalka Faransiiska ee kala ah Marine Le Pen iyo Emmanuel Macron ayaa xalay isku wajahay dood aad u kululeyd oo socotay laba saacadood oo toos looga daawaday Telefishinka.
Canada oo Joojisay Shuruudii Isku Biiritaanka Lamaanaha
Wasaaradda Sinjiyada iyo Socdaalka ee Canada ayaa sharuud ahayd in lamaanaha isku soo biirey ay wada noolaadaan ugu yaraan 2 sano ka saartey qodobada laga doonayo in ay buuxiyaan qoysaska isku soo biirayo.
Daacish oo Dib ugu soo Laabatay Qeybo ka Mid ah Mosul
Qarax baabuur oo ka dhacay bariga magaalada Mosul ee dalka Ciraq ayaa xaqiijiyey cabsidii ay taxliiliyayaasha siyaasadeed ka qabeen in howlgalka ka dhanka ah kooxdan uu gaarsiiyey guul-darro milatari balse aanu u geysan dib u dhac siyaasadeed.
Trump oo Raba Inuu La Kulmo Kim Jong Un
Maalmo yar uun kadib marki uu ku celceliyey inuu ka fakarayo tallaabo millatari oo ka dhan ah Kuuriyada Waqooyi, ayuu madaxweyne Donald Trump sheegay inuu doonayo inuu la kulmo hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un.
Suuriya oo Lagu Eedeeyey Adeegsiga Weeraro Kiimiko
Hey’ada Xuquuqda Aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeysay Ciidamada Dowlada Syria inay afar jeer adeegsadeen hub kiimika ah dhowrki bilood ee lasoo dhaafay.